Wararka Maanta: Arbaco, May 16, 2012-Taliska Milatariga Somaliland oo faah-faahiyay khasaarihii ka dhashay dagaal Hargeysa ku dhexmaray ciidankooda iyo dad hubeysan
Taliyaha Ciidanka Milatariga Somaliland Gen: Ismaaciil Maxamed Shaqale,ayaa sheegay in saddex askari kaga dhineen, afar kalana kaga dhaawacmeen, halka dablaydii hubaysnayda ay laba ka dileen, sagaalna ka dhaawaceen, 28 qofna maxaabiis ahaan u qabteen.
“Ciidankaas Qaranka ee halkaas degani isaga oo nabad ku waa-bariistay oo Salaadii Subax tukaday ayaa laba jiho laga soo weeraray, waxaana lagu riday hub noockasta oo dadku qaadi karo, haday noqon lahayd BKM, Baasuuke iyo qoryaha fudud, isla markaana wax aan lagu ridin muu jirin, natiijadii dagaalkaas ka dhalatay waxa ay noqotay in Ciidanka Qaranka ay halkaas kaga dhintaan saddex askari, waxaana kaga dhaawacmay 4 askari”ayuu yidhi taliyaha ciidanka Militariga Somaliland Gen: Shaqale, isagoo sheegay in xeradan la soo weeraray la yidhaa madaafiicda goobta horana loo odhan jiray xeradda Soodaanta.
Taliyaha Booliska somaliland, Cabdilaahi Fadal Iimaan ayaa isna sheegay in dablaydaasi ay hubka noocyadiisa kala duwan ku soo weerareen xeradda, isla markaana ay dhibaato ka soo gaadhay dad shacab ah oo aan labadda dhinac midna ahayn, waxaana halkaasi rasaastii habowga ahayd ku dhacday saddex qof oo kale oo mid haweenay uur leh ahayd midna ilmo yar ahaa oo halkaasi ku geeriyooday.
Wasiiradda Gaashaandhiga iyo Arrimaha gudaha, Axmed Cadami iyo Maxamed Nuur Duul, ayaa iyaguna sheegay inay ka xun yihiin dhibaatadaasi dhacday, sheegay in aanay dib dambe u dhicin, waxaanu ku tilmaameen inay tahay wax aanay Hargeysa ka filayn.
Sidoo kale, taliska ciidanka Milatariga ayaa soo badhnigay hub aad u badan oo laga qabsaday dablayda weerarka soo qaaday, hubkaas oo iskugu jira noocyadda kala duwan ee hubka.
Sidoo kale, waxa isaguna arrintaasi ka hadlay Suldaan Yuusuf Xiiray oo ka mid ah madax dhaqameedka dablaydan weerartay xeeradda ciidanka, waxaanu sheegay inuu ka xun yahay, isla markaana ay khalad ahayd in xero ciidan la weeraro, isagoo xukuumadda usoo jeediyey inay dulqaadato, wixii jirana ay keenayaan miiska wada hadalka.
Suldaan Yuusuf Xiiray ayaa sheegay in toban qof ay dhaawac ku noqdaan iska hor imaadkaasi, laguna dawaynayo cisbitaalka ciidamadda Militariga isagoo sheegay inay dawladda ka wada hadleen in inta dhaawacooga halista yahay la keeno cisbitaalka guud ee magaaladda Hargeysa.
“ inay xero ciidan galaan may ahayn oo khalad bay ahayd , dadkan dhintay waa kugu dhimay oo kaa dhimay, cid dambe oo is dhaqaajin kartaana ma jirto, waana nabadgalo wixii inaga maqan ee aynu doonayna miiska wada hadalka ayeynu ku dhamaysanaynaa”ayuu yidhi suldaan Xiiray.
Dablaydan weerartay xeradda ciidanka ayaa sheeganaya inay dhulkan ciidanku degan yahay ay iyagu leeyihiin, isla markaana dawladihii hore ay xoog kaga qaaday, sidaa darteed dhulkan loo baneeyo ama dhul kale loogu bedelo.
Dadweynaha magaaladda Hargeysa ayaa arrintan ku dhaliilay dawladad sababta ay u ogaan wayday inta waxan oo hub ah la soo ururinayey, waxaana dadweynuhu intoodda badnayd ka anfariireen hubka laxaadka leh ee laga soo qabtay dablayda, waana markii ugu horaysay ee si toos ah dad hubaysan iyo ciidanka milatarigu iskaga hor yimaadaan magaaladda Hargeysa.